“Tsy maty irery ny fiteny, fa vonoina mihitsy”: araka ny hita amin’ny fanjavonan’ireo teny indizeny ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraYásnaya Elena Aguilar Gil
Voadika ny 12 Avrily 2019 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Esperanto , English, Português, Ελληνικά, Filipino, русский, Shqip, українська, नेपाली, Română , 日本語, عربي, Español
Pikantsary misy ny lahatsary ahitana ny lahatenin'i Yásnaya Elena Aguilar Gil.
Ny lahatsoratra eto dia fanontana indray ny dikan-teny tamin'ny lahatenin'i Yásnaya Elena Aguilar Gil teo anoloan'ny Antenimiera Meksikanina. Nosoratana tamin'ny teny mixe (ayüük) ny lahateny tany am-boalohany ary nambara tao anatin'ny Taona iraisam-pirenena ho an'ny fiteny indizeny. Ahitana fandinihana momba ny fahaverezan'ny fiteny indizeny, ny fifandraisany amin'ny fahaverezan'ny faritany sy ny andrakitry ny Fanjakana ao anatin'izany toe-javatra izany ny lahatsoratra, izay azo jerena ato ny orizinaly amin'ny teny mixe.
Meksika. Ny rano sy ny teny. Meksika sy ireo anarany marobe miafina. Nëwemp : “ao amin'ny toeran'ny rano”, amin'ny fiteny mixe. Giajmïï : “ambony rano”, amin'ny fiteny chinantèque. Nangi ndá : “ny tany eo afovoan-drano”, amin'ny fiteny mazatèque. Kuríhi : “ao anaty rano”, amin'ny fiteny chichimèque. Nu koyo : “olona mando”, amin'ny fiteny mixtèque. Meksika no anarana nomena ity tanàna ity avy eo an'ity Fanjakana ity, Fanjakana Meksikana, ny Meksika.
Inona no miafina ao amin'ny ranon'i Nëwemp ?
Mandre hevitra sasantsasany aho ary miezaka hamaly fanontaniana iray: Nahoana no maty ireo fiteny ireo? Ankehitriny, fiteny eo amin'ny 6.000 no ampiasaina manerantany. Milaza ny katalogy misy ireo fiteny atahorana ho faty ao amin'ny oniversiten'i Hawaï fa amin'ny ankapobeny, fiteny iray no maty isan-telo volana eto amin'izao tontolo izao. Milaza ihany koa ny UNESCO fa afaka zato taona, dia saika ny antsasaky ny fiteny ampiasaina ankehitriny eto amin'izao tontolo izao no hanjavona.
Tsy mbola nitranga hatramin'izay teo amin'ny tantara izany, tsy mbola nisy fiteny marobe maty tahaka izany. Nahoana no maty ankehitriny ny fiteny? Tokony ho telon-jato taona lasa izay, nanomboka nizarazara izao tontolo izao ary natsangana ny sisintany anatiny. Nisara-bazana izao tontolo izao. Tsy azo atao intsony ny mivezivezy any amin'ny toeran-kafa raha tsy manana antontan-taratasy. Nozaraina ho Firenena na fanjakana roanjato izao tontolo izao, ka samy nanana governemanta, sainam-pirenena izay nanomezana voninahitra ny tsirairay, samy nanana fomba fijery manokana sy kolontsaina nomem-pahefana; ary, mba hananganana izany maha-tokana anatiny izany, dia fiteny tokana no nomena ny laharana fitenim-pirenena .
*Nohavakavahana sy notoherina ireo karazana fiteny hafa noho ny an'ny fanjakana sy ny governemanta.
Roanjato taona lasa izay, natsangana ny fanjakana nomena anarana hatramin'izao hoe Meksika. Telon-jato taorian'ny nandresen'ny Espaniola, tamin'ny taona 1820, niteny indizeny ny 65% n'ny mponina. Ny fiteny Espaniôla no fiteny vitsy an'isa tamin'ny namoronana ny fanjakana Meksikana. Ankehitriny, 6,5% sisa izahay mpampiasa ny teny indizeny. Ny fiteny Espaniôla ankehitriny no lasa fiteny manjakazaka. Roanjato taona lasa izay, ny fiteninay no maro an'isa: ny náhuatl, maya, mayo, tepehua, tepehuano, ny mixe ary teny indizeny rehetra.
Nandritra ny roanjato taona, lasa vitsy an'isa ny fiteninay.
Ahoana no nahafahana nanao izany? Nanapa-kevitra tampoka handao ny fiteninay ve izahay? Tsy izany velively. Dingana natosiky ny politikan'ny fanjakana izany. Nesorina ny lanjan'ny fiteninay mba hanomezana vahana ny fiteny tokana, dia ny teny Espaniola. Mba hampanjavonana ny fiteninay, dia nodarohana ireo razambenay, nosaziana sy noavakavahana izy ireo satria niteny ny fiteninay.
Tsy nitsahatra mihitsy ny nilazàna hoe: “Tsy misy lanjany ny teninao. Raha ho olom-pirenena Meksikana, dia tsy maintsy miteny ny tenim-pirenena, ny teny Espaniôla ianao. Ajanony ny mampiasa ny fiteninao”. Niezaka mafy ny fanjakana nametraka ankaterena ny fampitenenana teny espaniola mba hamongorana ny teninay, indrindra fa tany amin'ny rafi-pampianarana.
Meksika no nanala taminay ny fiteninay, ny rano amin'ny anarany no mahavery anay sy mampangina anay. Na dia nivoatra vao haingana aza ny lalàna, dia mbola avahana hatrany ankehitriny ny teninay any amin'ny rafi-pampianarana, ny rafi-pitsarana ary ny rafi-pahasalamana.
Ny tsy maty irery ny teninay, fa vonoina.
Vonoina ihany koa ny teninay rehefa tsy hajaina ny faritaninay, na amidy na omena olon-tsotra ny faritra midadasika amin'ny taninay; rehefa tsy tontosaina araka ny ho tokony izy ny fakàn-kevitra mikasika ny fidirana na tsia amin'ny tetikasa atao ao amin'ny faritaninay.
Vonoina ny teninay rehefa vonoina ireo miaro ny taninay, tahaka ny efa nitranga hatrany. Ahoana no ahafahanay manamafy orina ny teninay rehefa mamono ireo izay miteny azy isika, manampim-bava azy ireo sy mampanjavona azy ireo? Ahoana no ahafahan'ny fiteninay hiroborobo ao amin'ny zarataninay nalaina ankeriny?
Izany no mitranga ao amin'ny fiarahamoniko, Ayutla Mixe, ao Oaxaca. Tsy manana rano izahay. Efa ho roa taona lasa izay, nanaisotra ny loharano fangalanay rano ara-tantara ireo vondro-tafika mitam-piadiana ary amin'izao fotoana izao, mbola tsy nahazo rariny izahay, na dia efa nametraka fitoriana sy nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana aza. .
Tamin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana sy ny bala no nanesorana ny loharano taminay, tamin'ny fitaovam-piadiana no nangalàna ny loharano ary nitsahatra tsy nikoriana intsony izany. Na dia milaza aza ny lalàna fa zon'olombelona ny rano, efa roa taona sahady izao no tsy tonga tao an-tokantranonay ny rano ary ireo zokiolona sy ny ankizy no tena tràtran'izany.
Ny tany, ny rano, ireo hazo no mamelona ny fisian'ny teninay. Noho ny fisian'ny fanafihana tsy tapaka ny faritaninay, ahoana no ahafahan'ny teninay hovelomina indray?
Tsy maty ny teninay, vonoinamamono azy isika. Namafa azy ireo ny fanjakana Meksikana. Ny fomba fihevitra tokana, ny kolontsaina tokana, ny fanjakana tokana, ny rano amin'ny anarany no manafoana azy ireo.
Azonao atao ny mijery ny lahateny amin'ny teny mixe ao amin'ny lahatsary eto ambany: